न्यू हैम्पशायर | जेपीएमए, इंक
न्यू हैम्पशायर ईडब्ल्यूआईसी
EWIC मा स्वागत छ, पसल गर्न छिटो र सजिलो तरिका!
तपाईंको नयाँ eWIC कार्डको साथ यहाँ खरीदारीका लागि केही दिशानिर्देशहरू छन्:
EWIC का साथ तपाईको परिवारको WIC बेनिफिटहरु एक WIC खाता / eWIC कार्डमा तपाईको WIC अफिसमा राखिनेछ। तपाईंको खाद्य पदार्थहरूको सूची तपाईंको लाभ अवधिको लागि सुरु र अन्त्य मितिको साथ तपाईंलाई दिइनेछ। तपाईं आफ्नो NH eWIC कार्ड प्रयोग गर्नुहुनेछ तपाईंको WH खाद्य पदार्थ NH WIC अधिकृत स्टोरहरूमा खरीद गर्न।
को लागी हेर्नुहोस् NH WIC स्वीकृत यहाँ साइन इन गर्नुहोस्।
तपाईंको परिवारको फाइदाको ब्यालेन्स प्रयोग गरेर तपाईंको WIC खानाहरू चयन गर्नुहोस् एनएच वाईसीआई स्वीकृत खाद्य लिस्ट.
WIC खाद्य पदार्थहरू लाभ महिनाको रूपमा आवश्यक खरिद गर्न सकिन्छ, केवल तपाईलाई आवश्यक WIC वस्तुहरू किन्नुहोस्।
सानो स्टोरमा किनमेल गर्दा तपाईले WIC वस्तुहरू अलग गर्न आवश्यक छ।
क्यासियरले WIC खाद्य वस्तुहरू स्क्यान गर्दछ। (सकदिन आत्म-चेकआउट लेन प्रयोग गर्नुहोस्।)
हाम्रो eWIC कार्ड स्वाइप गर्नुहोस्। भुक्तानीको अन्य रूपहरू पहिले तपाईको EWIC कार्डको प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईंको चार अंकको पिन प्रविष्ट गर्नुहोस्।
कार्ड रीडरले तपाईंलाई कार्डमा ब्यालेन्सबाट WIC खरिद कटौती गर्नु अघि WIC फूडहरू पुष्टि गर्न अनुरोध गर्नेछ। तपाईंको ईडब्ल्यूआईसी कार्डबाट खरिद गरिएका खाद्यहरू स्वीकृत गर्नुहोस्।
कुनै बाँकी शेष रकम नगद, EBT वा स्टोर द्वारा स्वीकार गरिएको भुक्तानीको अन्य रूपको साथ भुक्तानी गर्न सकिन्छ।
तपाइँको कार्ड र रसीद लिनुहोस्। तपाईंको रसीदले तपाईले के गर्नुभएको छ र तपाईंको ईडब्ल्यूआईसी कार्डमा के छोडियो।
WIC खाद्य पदार्थहरू लाभ महिनाको लागि सुरू र अन्त मिति बीचमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुनै पनि प्रयोग नगरिएका फायदाहरूले रातको दिनमा अन्त्य हुने मितिको लागि म्याद समाप्त हुनेछ।
एनएच वाईसीआई स्वीकृत खाद्य लिस्ट
स्पेनिश खाना सूची
PIN एक चार अङ्क गोप्य कोड हो जुन तपाईंलाई आफ्नो ईडब्ल्यूआईसी कार्ड प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। पिन चयन गर्दा, तपाइँलाई सम्झनका लागि सजिलो चार अंक छनौट गर्नुहोस्, तर कसैको लागि कडा मेहनत गर्न कठिन छ।
म कसरी मेरो पिन सुरक्षित राख्छु?
तपाईंको PIN लाई कुनै पनि व्यक्ति नगर्नुहोस् जुन तपाईं आफ्नो कार्ड प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न। यदि कसैले तपाईंको पिन जान्दछ र तपाईंको अनुमति बिना खाद्य फायदा पाउन तपाईँको कार्ड प्रयोग गर्दछ, ती लाभहरू प्रतिस्थापन गरिने छैन।
के भयो भने म मेरो पिन बिर्सन्छ वा PIN परिवर्तन गर्न चाहन्छु?
एक नयाँ पिन छान्नुको लागि तपाईंको कार्डको पछाडि अवस्थित ग्राहक सेवा नम्बरलाई कल गर्नुहोस्। तपाईंलाई प्राथमिक कार्डधारकको जिप कोड र जन्म मितिको आवश्यकता पर्नेछ।
के हो यदि म स्टोर मा गलत पिन दर्ज गर्दछु?
तपाईंको सही पिन प्रविष्ट गर्नका लागि चारवटा मौकाहरू छन्। यदि सही PIN चौथो प्रयासमा प्रविष्टि गरिएको छैन भने, तपाईंको eWIC कार्ड लक हुनेछ र आधी रातमा रिसेट हुनेछ। तीन असफल प्रयासहरू पछि, ग्राहक सेवालाई तपाइँको पिन रिसेट गर्न र तपाइँको कार्ड लक गर्नबाट बच्नको लागि कल गर्नुहोस्।
थप मद्दत आवश्यक छ?
यदि तपाईंको ईडब्ल्यूआईसी कार्ड गुमाएको छ, चोरी, वा क्षतिग्रस्त तपाईले आफ्नो स्थानीय WIC कार्यालयसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ "WIC कार्यालय खोज्नुहोस्"बटनमा ग्राहक सेवा कल गर्नुहोस् 1-855-279-0680, वा राज्य WIC कार्यालय मा कल गर्नुहोस् 1-800-942-4321.